Conte oo ka hadlay waxa uu Eden Hazard keydka ugu soo dhaafay kulankii Chelsea ee Xalay – Gooldhalin
Conte oo ka hadlay waxa uu Eden Hazard keydka ugu soo dhaafay kulankii Chelsea ee Xalay
Muuse Abdi May 10, 2018	No Comments
Antonio Conte ayaa difaaca go’aankii ay taageerayaasha Chelsea u arkeen Daciifnimada ee uu safka billowga ee kooxdiisa uga saaray Eden Hazard ciyaartii ay xalay kooxda Chelsea 1-1 la dhaafi weysay naadiga Huddersfield.
Willian, Pedro iyo Alvaro Morata ayaa lagu soo billaabay safka hore ee Chelsea iyadoo weliba kooxdu ay dagaal ugu jirtay sidii ay usoo gaari laheyd Champions League.
Laurent Depoitre ayaa u dhaliyay goolka hore kooxdiisa Huddersfield daqiiqaddii 50-aad ka hor inta aan midka garab dhaca laga helin Marcos Alonso oo dhaliyay daqiiqaddii 62aad.
Wuxuu beddel kusoo geliyay Hazard Daqiiqadii 59aad iyadoo markaas ay kooxdiisu noqotay mid gacan sare ku leh ciyaarta, kulankii Huddersfied xilli garab dhacaas uu uga filnaa kooxda dhowaan ka timid heerka hoose in ay ka badbaaddo u laabasha heerka labaad, iyadoo Sanadkan sii joogeysa horyaalka Premier League.
Waxaa la weydiiyay sababta uu u nasiyay Hazard in ay tahay ciyaarta finalka ee Chelsea FA Cup oo ay ku dhacayaan Manchester United in ay tahay, Conte wuxuu ku jawaabay: ‘Maya, Marnaba ma aysan aheyn.
‘Waan sameeyay isbeddelladaan oo kale kulankii Burnley. Marka aad sameyneyso isbeddello waxaad u baahantahay dad sida [Alvaro] Morata, Willian iyo [Andreas] Christensen ah oo kulli aan fariisiyay kulankaas hore.
‘Waxaan heysannaa koox guuleysan karta, Waxaan bixinnay tamar badan kulankii Liverpool. Kubadda cagtu maalin uun wey hadli doontaa, had iyo goor Khatar ba’an ayaad ku jirtaa.’
Previous Previous post: Safafka rasmiga ah: Sevilla vs Real Madrid, Vallejo, Ceballos, Theo iyo Casilla oo kusoo Biloowday, Ronaldo waa keyd
Next Next post: Ma Liverpool ayaa la wareegtay Nabil Fekir iyo Ousmane Dembele? Milkiilaha Reds oo ka hadlaya!!